Events and Exhibitions - Myanmar Builders Guide
Thursday, 06 December 2018 10:52
VIETNAMEXPO 2018 in Myanmar မကြာမီကျင်းပတော့မည်
ဗီယက်နမ်ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအေဂျင်စီ/ဗီယက်နမ်စက်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံရျိ ဗီယက်နမ်သံရုံး၊မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအကြီးဆုံးပို့ကုန်ပြပွဲအား ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗီယက်နမ်ပို့ကုန်ပြပွဲသည်နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးမြှင့်တင်မှုအား ထူးခြားစွာပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Tuesday, 27 November 2018 11:05
မြန်​မာနိုင်​ငံနှင့်​ နိုင်​ငံတကာရှိ အိမ်ခြံမြေ Project များ စု​ပေါင်းအ​ရောင်းပြပွဲကြီး
နိုင်ငံတကာသို့ သွားရောက်စရာ မလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတင်​ Project များစွာကိုသာမက နိုင်ငံတကာ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အကြောင်းကို ပါ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်သလို...
Monday, 26 November 2018 15:09
ကိုရီးယား-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအနေဖြင့် တည်ဆောက်မည့်ရန်ကုန်-ဒလ မြစ်ကူးတံတားစီမံကိန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ပန္နက်ရိုက်အခမ်းအနား ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်က ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒလမြို့နယ်တွင်ပြုလုပ်သည့် ဒလတံတားတည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်ရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။
Tuesday, 20 November 2018 15:41
မြန်မာ့စီးပွားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ Myanmar Commerce Fair 2018
မြန်မာ့ကုန်သွယ်စီးပွားပွဲတော် (၂၀၁၈) ကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့နဲ့ ၂ ရက်နေ့ကျရင် Inya Lake ဟိုတယ်၊ Yangon Convention Center မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Friday, 16 November 2018 13:17
MYANBUILD' 2018 ကျင်းပနေပြီ
မြန်မာ့အကြီးမားဆုံးသော နိုင်ငံတကာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ လေအေးပေးစနစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြသသော ကုန်စည်ပြပွဲကြီးကို MIVAR 2018,MYANMAR HARDWARE 2018 MYANGLASS 2018 တို့နှင့်အတူပူးတွဲပြသနေပြီဖြစ်ပြီး ပြပွဲတွင် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်နှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Wednesday, 14 November 2018 14:36
MYANBUILD' 2018 ပြပွဲ ကျင်းပတော့မယ်နော်
မြန်မာ့အကြီးမားဆုံးသော နိုင်ငံတကာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ လေအေးပေးစနစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြသသော ကုန်စည်ပြပွဲကြီးကို သင်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်မည့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ရန် အတွက် ပြပွဲကို လာရောက်လေ့လာရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Wednesday, 14 November 2018 13:22
ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်းတင်ဒါတင်သွင်းခြင်း၊ လက်ခံခြင်း နှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်IFCတို့ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်မိုးပျံအမြန်လမ်း တင်ဒါတင်သွင်းခြင်း၊ လက်ခံခြင်း နှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို နေပြည်တော် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စုဝေးခန်းမ ဆောင်၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Friday, 09 November 2018 10:15
ဘက်စုံသုံးမြေကွက်နဲ့ Shop House အရောင်းပြပွဲရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးပြီလား?
သင်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ စီစဉ်နေသူလား?
Thursday, 08 November 2018 11:06
ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သည့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများနှင့် ပတ်သက်၍ စာတမ်းပြုစုရန်ဂျာမနီနိုင်ငံစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှ တာဝန် ရှိသူများသည် မန္တလေးတိုင်းကုန် သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ် ငန်းရှင်များထံ နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက်၌ လာရောက်မည်ဖြစ်သည်။
THL Foundation Equipment (Myanmar) Co.,Ltd.
( Geo-Engineering )
Fortune Elevator & Escalators (Sigma Elevator)
Green Peace Decoration